Tamu | Myanmar Man's Diary
09.16.08 Buses in Yangon (Rangoon)
If you ever traveled to Yangon for the first time, you will be amazed by the public buses running the streets of Rangoon. Not only are they old and worn out, they are also overcrowded. And some of them date back to the pre-world world2era. Many wooden buses from the colonial period still run the streets of Rangoon. They are old, dirty, crowded and break down easily and frequently. The roof is also quite low so tall passengers have to bend their neck and back when standing.
However, those are not the only buses that run the streets ... Tagged: Myanmar Information, Myanmar Travel, Tamu, Travel	03.01.07 Kalay Tamu Highway
ကလေး - တမူး ကားလမ်းကလေး - တမူး ကားတွေ ကလေး မြို့တွင်း ကားလေးဝင်း ကနေ နေ့စဉ် ထွက်ပါတယ်။ Van (Town Ace) နဲ့ မှန်လုံ ကားတွေ ပြေးဆွဲပါတယ်။ ကားကြီးတွေလဲ ပြေးဆွဲပေမယ့် ကုန်အဓိက တင်တဲ့ အတွက် လူစီးလို့ အဆင် မပြေပါဘူး။ Van ကား ၂၅၀၀ ကျပ်၊ မှန်လုံ ၂၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးက နေ့စဉ် နံနက် ၇ နာရီ နဲ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ထွက်ပြီး၊ တမူးကနေ နံနက် ၉ နာရီနဲ့ နေ့လယ် ၂ နာရီ ထွက်ပါတယ်။ကလေးက ကားမထွက်မီ မှတ်ပုံတင် တွေကို ကားမောင်းသူထံ အပ်နှံ ရပါတယ်။ ကလေး အထွက် စစ်ဆေးခြင်း မရှိပါ။ ကားလမ်းမှာ အထူးပင် ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ အကူအညီနဲ့ ဖေါက်လုပ် ထားတာလို့ သိရပါတယ်။ အချို့ နေရာတွေမှာ ကျင်း၊ ချိုင့် အနည်းငယ် ရှိသည်မှ အပ တော်တော် ကောင်းပါတယ်။နှစ်လမ်းမောင်း ဖြစ်ပြီး လမ်းညွှန် ဆိုင်ဘုတ်များ ပြည့်စုံစွာ ရှိပါတယ်။ကလေးက မိုင် (၆၀) ခန့်မှာ ခန်းပတ် မြီု့နယ်ခွဲကို ရောက်ရှိပါတယ်။ ခန်းပတ်မှာ ကားတွေ ခဏ ရပ်နားပြီး convoy ဖွဲ့၍ ရဲ၊ တပ် ... Tagged: Kabaw Valley, Kalay Myo, Myanmar Travel, Tamu	03.01.07 Kalay Tamu Highway
Buses to Tamu leave every day from the bus terminal in Kalay. Buses leave at 9:00 AM and 2:00 PM everyday. The vans (Town Ace) cost 2,500 kyatsaperson while the minibuses cost 2,000 kyats. There are big buses too but they mainly carry goods and not very convenient for people to travel. Buses from Tamu leave at 9:00 AM and 2:00 PM everyday.Passengers have to hand over their ID cards to the driver before start of the trip. There is no search on leaving Kalay. The road is very nice except forafew bumps and holes. The ... Tagged: Kabaw Valley, Kalay Myo, Myanmar Travel, Tamu	03.01.07 Morai and Nan Pha Long Market
About 10 minutes away from Tamu by bus is Morai,atown from India, and Nan Pha Long Market and village, in Myanmar. It cost only 200 kyats per person forabus ride. There are many Indians from Morai coming to shop at Nan Pha Long Market. Marchandises on sale include those from China, Thailand, as well as foods and produsts from Myanmar. People from Tamu also come and buy Indian products too.There is no fence between Morai and Myanmar side although there isaborder check point. People could pass the border freely without restriction, and people from ... Tagged: Kabaw Valley, Myanmar Travel, Tamu	03.01.07 Morai and Nan Pha Long Market
နန့်ဖာလုံ ဈေးနှင့် မိုရေးမြို့တမူးကနေ လိုင်းကား (သို့) ဆိုင်ကယ် သုံးဘီး စီးသွားရင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မိုရေးမြီု့နဲ့ ကပ်လျက်က နန့်ဖာလုံ ဈေးကို ရောက်ပါတယ်။ တစ်ယောက် ၂၀၀ ကျပ် ကျပါတယ်။ ၁၀ မိနစ် လောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ နန့်ဖာလုံ ရွာမှာ ရှိလို့ ခေါ်တာပါ။ မြန်မာ နိုင်ငံသား ကသည်း လူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ ရွာကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမိုရေးမြို့နဲ့ ကပ်လျက်ရှိပြီး မိုရေး မြို့သူ၊ မြို့သားတွေ ဈေးလာဝယ် နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား အများ အပြား ဈေးလာ ဝယ်ကြလို့ အလွန်ပဲ စည်ကားလှ ပါတယ်။ တမူး မြို့သူ၊ မြို့သားတွေလဲ အိန္ဒိယ နိုင်ငံထွက် ကုန်ပစ္စည်း တွေကို လာဝယ် ကြပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်း တွေက စုံလှပါတယ်။ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ တရုတ် ကုန်ပစ္စည်း တွေအပြင် မြန်မာ နိုင်ငံထွက် အစားအသောက်၊ အချဉ်ထုပ်၊ ယိုစုံ၊ ဆပ်ပြာနဲ့ အခြား လူသုံး ကုန်ပစ္စည်း တွေ ရောင်းချ ကြပါတယ်။ မိုရေးကနေ ဈေးထဲကို လွတ်လပ်စွာ ဝင်ထွက် သွားလာ နိုင်ကြပါတယ်။ နန့်ဖာလုံ ရွာနဲ့ တမူးမြို့ အထိ လာရောက် လည်ပတ်နိုင် ကြပါတယ်။ မိုရေးနဲ့ မြန်မာပြည် ကြားမှာ ခြံစည်းရိုး မရှိတော့ အတား အဆီး မရှိ ... Tagged: Kabaw Valley, Myanmar Travel, Tamu	02.28.07 Tamu, Kabaw Valley
Tamu isatown in Kabaw Valley. It is situated justafew miles away from India border. Although not as large as Kalay, it is stillalarge town, with many good houses and buildings. There are many two to three storied buildings in Tamu, and many rich people live in Tamu. Roads are also wide and clean and the buildings look modern too. Many of the inhabitants in Tamu are Chin and Burmese with many rich Gurkha, and some Shan and Kachin too.There are about4or5guest houses in Tamu. All of them are quite clean ... Tagged: Kabaw Valley, Myanmar Travel, Tamu	02.28.07 Tamu, Kabaw Valley
တမူးမြို့တမူးမြို့ဟာ ကဘော်ချိုင့်ဝှမ်းက မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ မြန်မာ နယ်စပ် အနီး တည်ရှိပြီး နယ်စပ်နဲ့ မိုင်အနည်းငယ်ပဲ ကွာဝေးပါတယ်။ တမူးမြို့ဟာ အတော်အတန် ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ကလေးလောက် မကြီးပေမယ့် အရွယ် အလတ်စား မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွင်းလမ်းများ ကျယ်ဝန်းပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ် ပါတယ်။ အိမ်ကြီး အိမ်ကောင်းတွေလဲ အလွန်ပေါပါတယ်။ ခေတ်မှီ ၂ ထပ်၊ ၃ ထပ် တိုက်တွေ အများ အပြား ရှိပါတယ်။ သူဌေး သူကြွယ် အလွန်ပေါတဲ့ မြို့တစ်မြို့ပါ။ ဗမာ၊ ချင်းလူမျိုးတွေ အများစု နေထိုင်ကြပြီး ဂေါ်ရခါးတွေလဲ အများ အပြား နေထိုင်ကြပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ ဂေါ်ရခါးတွေ အတော်များ ပါတယ်။ ရှမ်း၊ တရုတ်နဲ့ ကချင် လူမျိုးတွေလဲ နေထိုင် ကြပါတယ်။တမူးမှာ တည်းခိုခန်း ၄၊ ၅ ခု ရှိပါတယ်။ သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ပြီး ဈေးလဲ သင့်တော် ပါတယ်။ အစား အသောက် ဈေးလဲ သက်သာပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ ပေါပါတယ်။ မြီု့ထဲက ချစ်တီး ထမင်းဆိုင် လက်ရာ အတော် ကောင်းပါတယ်။ ချစ်တီးဆိုင် ဆိုရင် လူတိုင်း သိပါတယ်။ မနက်စောစော ဆိုရင် အာလူး ပူရီနဲ့ တိုရှည် ကောင်းကောင်း ရပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းတွေ အနှံ့ အပြား တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေက ခန့်ညား ... Tagged: Kabaw Valley, Myanmar Travel, Tamu	recent posts